Calanka Soomaaliya oo hoos loo dhigayo muddo saddex bari ah si loogu maamuuso Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCalanka Soomaaliya oo hoos loo dhigayo muddo saddex bari ah si loogu maamuuso Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar
August 23, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Calanka Soomaaliya oo hoos loo dhigayo muddo saddex bari ah si loogu maamuuso marxuum Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalka Soomaaliya ahna kusimaha Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari ayaa maanta oo Talaado ah kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho guddi dowlada federaalka ay u xil-saartay qabanqaabada aaska Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar oo xilal sare dalka kasoo qabtay.
Mr. Jawaari oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in howlaha qabanqaabada aaska Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar ay meel fiican marayaan.
Jawaari ayaa xusay in calanka dalka Soomaaliya hoos loo dhigi doono muddo saddex bari ah oo caawa ka bilaabmaysa, si loogu maamuso looguna sharfo marxuum Maxamed Cali Samatar.
Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar oo xilal badan oo ay kamidyihiin, wasiirka gaashaandhiga, madaxweyne ku xigeen iyo raysulwasaare dalka kasoo qabtay ayaa asbuucaan bilowgiisii ku geeriyooday dalka Maraykanka isagoo 85-sanno jir ahaa.
Aas qaran ayaa la filayaa in dhawaan loogu sameeyo caasimada dalka Soomaaliya, Muqdisho.
September 13, 2016 Shir madaxeedkii IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
June 30, 2016 Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo dib u magacaabay guddiga doorashada heer federal